Randrianasolo Jean Nicolas, tafaresaka tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’i Tsimbazaza ny talata 05 febroary teo. Na dia resy teo amin’ny fifidianana aza ny olona notohanako, ny kandida Rajaonarimampianina Hery, dia tsy hiova fitana intsony ny tenako fa hijanona hatrany amin’ny fanohanana an’ity filoha teo aloha ity, hoy izy. Be ny zava-bitany tany amin’ny distrika misy ahy ka tsy hohadinoiko sy ny vahoakan’i Betroka. Manambara etoana anefa aho fa hirotsaka amin’ny anaran’ny GJMP « Groupement des Jeunes Malagasy Patriotiques » tarihako na amin’ny anaran’ny « Plateforme » hisy azy mety hitsangana atsy ho atsy ». Hotohizana hatrany ny fanaovana asa soa any Betroka fanaoko hatrizay naha-solombavambahoaka ahy izay noho ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka namana avy any ivelany. Hatolotra an’ireo kaominina 12 efa voalaza teo aloha mialoha ny 27 martsa ho avy izao ohatra, hoy izy, ireo omby 6 avy nampanantenaiko fa homena an’ireo kaominina ireo.